amazon prime video yeiyo android tv haizowani & apos; t ive inowanikwa chero nguva munguva pfupi
Kuru Nhau & Ongororo Amazon Prime Vhidhiyo yeApple TV haizowani & apos; t ive inowanikwa chero nguva munguva pfupi
Amazon Prime Vhidhiyo yeApple TV haizowani & apos; t ive inowanikwa chero nguva munguva pfupi
Amazon neGoogle yakaziviswa mwedzi wapfuura kuti iyo yepamutemo YouTube app ichave ichiwanikwa pane Fire TV zvishandiso uye iyo Prime Vhidhiyo ichaendeswa kunze kune Android TV uye Chromecast. Nehurombo, kana usati wakwanisa kutora Amazon Prime Vhidhiyo pane yako Android TV parizvino, mikana ndeyekuti iwe haugone & apos; haukwanise kuzviita chero nguva munguva pfupi, uye heino chikonzero.
Zvinotaridza sekunge Google haizoiti iyo Amazon Prime Vhidhiyo app iwanikwe zvakanyanya kuburikidza neiyo Play Store, 9to5google inoshuma. Mutengi achasundidzirwa kunze kweOEM neOEM hwaro, zvinoreva kuti & zvese zvinokwana kumugadziri wako weTV TV kuita kuti Amazon Prime Vhidhiyo app iwanikwe kurodha pasi.
Hisense ndomumwe wevatangi vekutanga veTV vakatotora iyo nyowani yeAmazon Prime Vhidhiyo app kune mamwe maTV TV, sezvakataurwa neReddit mushandisi CenterInYou . Iyo yekuvandudza ine iyo Prime Vhidhiyo app zvakare inowedzera nyowani boot-up skrini uye June chengetedzo chigamba kana iwe uchida kuziva.
Iyo Prime Vhidhiyo app ichaitwa chete kuti iwanikwe kuburikidza neGoogle Play Chitoro kana uye kana maOEMs afunga kuiburitsa kunze, saka hapana & apos; zvakawanda zvaungaite kunze kwekumirira uye kutarisira kuti wako Android TV mugadziri achaburitsa iyo app munguva pfupi pane gare gare.
samsung tab s7 zuva rekuburitsa
Google Contacts kudzoreredza inowedzera sarudzo yekufananidza nhare dzakachengetwa pafoni
T-Mobile ine maBeats Solo3 waya asina waya anotengeswa pamutengo wakaderera $ 100 mutengo
T-Mobile inotarisirwa kuvhura Galaxy Note 8 BOGO inopa ichi Chishanu
LG inomira kugadzira mafoni zvachose, uye sarudzo inogona kuziviswa nekukurumidza neMuvhuro